Shaxda Hadda Ee Aduunka- Halyayga Liverpool Ee John Barnes Oo Soo Xushay Shaxda Kooxda Hadda Aduunka Ugu Fiican- Messi & Ronaldo Oo Uu Mid Iska Indhotiray. - Gool24.Net
Shaxda Hadda Ee Aduunka- Halyayga Liverpool Ee John Barnes Oo Soo Xushay Shaxda Kooxda Hadda Aduunka Ugu Fiican- Messi & Ronaldo Oo Uu Mid Iska Indhotiray.
Halyayga kooxda Liverpool ee John Barnes oo hadda ah khabiir kubbada cagta ka faalooda ayaa soo xushay shaxda kooxdiisa kubbada cagta aduunka wuxuuna iska indho tiray mid ka mid ah ciyaartoyda tobankii sanadood ee ugu danbeeyay aduunka soo haystay ee Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo.
John Barnes ayaa soo doortay shaxda waqti xaadirkan uu arko in ay kubbada cagta aduunka ugu fiican tahay inkasta oo uu magacyo waa wayn iska dhaafay.
Xidigii hore ee xulka qaranka England ee John Barnes ayaa shaxda kooxda aduunka ee uu soo xulay waxa uu gabi ahaanba boos uga waayay Cristiano Ronaldo inkasta oo uu ku soo darsaday ninka ay sida wayn Ronaldo u soo xifilmaneen ee Lionel Messi.
John Barnes oo muran ku abuuray in Cristiano Ronaldo aanu shaxdiisa aduunka ku soo xulan ayaa afar ciyaartoy oo kooxda hadda ee Liverpool ka tirsan waxa uu boos uga helay shaxda uu soo doortay.
John Barnes oo 384 kulan oo horyaalka heerka kowaad ee England ah ka soo ciyaaray shaxda kooxdiisa ee aduunka waxa uu goolhaye uga dhigay Alisson Becker oo ah goolhayaha kooxda Reds ee uu Klopp hogaaminayo.
Waxa uu afarta difaaca ah u soo wada doortay Alexander-Arnold iyo Virgil van Dijk oo Liverpool kawada tirsan,kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos iyo difaaca bidix ee kooxda Bayern Munich Alphonso Davies .
Waxa uu Barnes saddexda khadka dhexe ee shaxda kooxdiisa waqti xaadirkan aduunka ugu fiican uu soo wada doortay N’Golo Kante oo Chelsea ka tirsan, kubbad sameeyaha Man City ee Kevin De Brunye iyo xidiga khadka dhexe ee Barcelona ee Frenkie De Jong.
Saddexda weerarka shaxda kooxda aduunka ee uu Barnes soo doortay waxaa ku soo wada baxay Lionel Messi, Robert Lewandowski iyo Sadio Mane .
Laakiin muranka ugu wayn ayaa ka dhashay markii uu Barnes uu soo bandhigay sababta aanu u soo xulan Cristiano Ronaldo wuxuuna yidhi: “Cristiano Ronaldo wali waa ciyaartoy waxtar leh, laakiin ma laha awoodii uu mar lahaan jiray”.
Laakiin John Barnes oo la hadlayay Bonus Code Bets waxa uu soo bandhigay in Lionel Messi yahay xidigii uu abid ugu jeclaa wuxuuna yidhi: “Ciyaartoyga aan ugu jecelahay waligay waa in uu halkaas joogaa waana Messi. Isagu naftiis ayuu u hadlaa”.
John Barnes oo ka hadlaya Lewandowski ayaa yidhi: “Waxaan ku tagay Lewandowski sababtoo ah haddii aad ciyaarayso halkaas oo ay cidhiidhi tahay oo aad doonayso in aad kubbada xerada ganaaxa ku hesho, waxaad u baahan tahay gooldhaliye weerarka dhexe ah oo la mid ah Harry Kane ama Lewandowski”.
“Aniga ahaan, No.9 ka ugu fiicani waa Lewandowski. Marka aad ka hadlayso heerkii Ian Rush, isagu waa mid kooxdiisii ka mid ahaa” ayuu John Barnes oo Lewandoski ka sii hadlayaa raaciyay.
Shaxda Hadda Aduunka Ugu Fiican Ee UU John Barnes Soo Xushay:
Difaacyada: Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies
Khadka Dhexe: N’Golo Kante, Kevin De Brunye, Frenkie De Jong
Weerarka: Lionel Messi, Robert Lewandowski, Sadio Mane
Shaxdaa yaa helaya